Vols kubva kuHawaii kuenda kuAmerican Samoa paHawaiian Airlines izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Vols kubva kuHawaii kuenda kuAmerican Samoa paHawaiian Airlines izvozvi
Airlines • nhandare yendege • American Samoa Kuputsa Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hawaii Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Hawaiian Airlines iri kutangazve basa risingamire pakati paDanmark K. Inouye neHonolulu nendege dzepasi rose dzePago Pago neAirbus A330.
Hawaiian Airlines inotangazve ndege kuenda kuAmerican Samoa.
Hawaiian Airlines ichave ichipa ndege mbiri pamwedzi.
Hawaii kuenda kuAmerican Samoa nzira ichashandiswa neHawaiian Airlines Airbus A330 ndege.
Hawaiian Airlines iri kubatana zvakare Kuende (KUE) uye American Samoa (PPG) nekumisazve ndege dzisiri dzakamira pakati peHawaii neU.S. Territory svondo rinouya. Hawaiian, iyo yakamisa basa rayo rechipiri-vhiki reHNL-PPG pakutanga kwechirwere cheCOVID-19 muna Kurume 2020, ichave ichipa ndege mbiri pamwedzi kutanga neMuvhuro kusvika Zvita 20.
"Tinofara kudzosa American Samoa mudandemutande redu uye tinogamuchira vaenzi vanga vakamirira nemoyo murefu nendege kuti titangezve," akadaro Brent Overbeek, mutevedzeri wemutungamiri wenyika pakurongwa kwemambure uye manejimendi Hawaiian Airlines. "Sevavakidzani vepachitsuwa chePacific, tinonzwisisa kuti vashanyi vedu vanovimba zvakadii nebasa redu uye tinotarisira kubatanidza zvakachengeteka mhuri neshamwari."
Hawaiian, iyo inopa chete inogara yakarongwa yemhepo kubatana pakati pezvitsuwa zviviri zvisungo, yakambomira ndege kwemwedzi gumi neshanu pachikumbiro chehurumende yeAmerican Samoa. Musi waNdira 17, Hawaiian akatanga kushanda nendege dzakateedzana kuunza kuAmerican Samoa zviuru zvevagari vakanga varaswa pamba kubva kuHawaii, nyika yeUS nekupfuura.
Vafambi kuenda kuAmerican Samoa vanofanirwa kuteedzera akateedzana ehurongwa hwehurumende pamwe nechengetedzo, kusanganisira humbowo hwekudzivirira uye zvisirizvo pre-kufamba bvunzo mhedzisiro. Mamwe mashoko anowanikwa paTALOFApass webhusaiti. Vashanyi vanobhururuka kuenda kuHawaii vanofanirwa kugadzira nyika yeHawaii Safe Safe Travels account uye kurodha kadhi yavo yekudzivirira kana isina kunaka pre-yekuyedza bvunzo kuti vadzivise kugara kwavo voga pavanosvika.
Hawaiian ichaenderera ichishandisa nzira neayo 278-chigaro, yakafara-muviri ndege yeAirbus A330.
FIFA World Cup Qatar: gumi emamwe anonakidza matsva ...
Ndege nyowani kubva kuAntigua kuenda kuBarbados uye ...